Semalt Mobile मोबाइल SEO मिथकहरू मिल्छ
एसईओ वेबसाइट अनुकूलन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। अधिक र अधिक व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको स्मार्टफोनमा खोजी गर्दै, मोबाइल वेब पनि विस्फोट भएको छ। मोबाइल फोनका लागि एसईओ पनि तातो विषय बनेको छ, तर दु: खको कुरा तपाईले मोबाइल एसईओ को बारेमा पाउन सक्नुहुने धेरैजसो जानकारी गलत छ।
Semalt डिजिटल सेवाहरूको विशेषज्ञ रस बार्बर, शीर्ष 8 SEO मिथकलाई हटाउँछ ।
मान्यता १: मानिसहरूले पीसी र मोबाइलमा खोजी गर्ने कुरा उस्तै हो
सत्य: व्यक्तिहरू गइरहेका छन्, त्यसैले तिनीहरूसँग विस्तृत रिपोर्टहरू, लामो ब्लग पोष्टहरू र तिनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा अनुसन्धान खोजीहरू पढ्ने विलासिता छैन। सामान्यतया, तिनीहरू द्रुत उत्तरहरू खोजिरहेका हुन्छन्। यसले स्वचालित तवरले फरक पार्दछ कि मानिसहरूले जुनसुकै उपकरणमा खोजिरहेका छन्। व्यक्तिले उनीहरूको मोबाइल उपकरणहरूमा के खोजिरहेका छन् भनेर जाँच्न उत्तम तरिका भनेको गुगल एड्वर्ड्स प्रयोग गर्नु हो। तपाईले टाइप गर्नु भएको कुञ्जी शव्दहरूको मोबाइल अनुपातमा अन्तरदृष्टि प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
मिथ्या २: मोबाइल खोजी र पीसी खोजले समान परिणामहरू देखाउँदछ
सत्य: खोजी ईन्जिनहरूले कडा मेहनत गरीरहेका छन् मानिसहरूलाई सजीलो बनाउनको लागि मानिसहरूलाई आवश्यक परेको बेला उनीहरूलाई आवश्यक पर्दछ। यसको मतलव मोबाईल मैत्री नभएका वेबसाइटहरूले परिणाममा उच्च श्रेणीमा राख्दैनन्। तपाइँको वेबसाइट पीसी को लागी अनुकूलित हुन सक्छ, तर मोबाइल खोजहरु को लागी खराब रैंक हुन सक्छ। यसैले, पीसी खोजी र मोबाइल खोजीको नतीजाहरु बिभिन्न भिन्न छन्। गुगलको अध्ययनले यस कुराको पुष्टि दिन्छ। अध्ययनमा, खोज इञ्जिन विशालले पत्ता लगाए कि त्यहाँ फरक interface%% फरक फरक ईन्टरफेसको अनुसार परिणामहरू प्रदर्शन गरिएको थियो।
मिथ्या:: व्यक्तिले चाँडै नै तिनीहरूको फोनमा खोजी गर्न रोक्दछन् किनकि तिनीहरूले पहिन सक्ने उपकरणहरूमा खोजी सुरू गर्दछन्
सत्य: पहिरिन योग्य उपकरणहरूले बजारलाई आँधीबेहरीले लिइसकेका छन्, यद्यपि तिनीहरू उचित खोजहरू गर्ने प्रयासमा परिष्कृत छैनन्। पहनने योग्य खोज टेक्नोलोजीको लागि युग शुरुवात मात्र हो। सिरी र गुगल गग्गल्सले क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयास गरेका छन्, तर सिरीले मात्र बजारमा केवल stake% भाग लिन्छ, यसले देखाउँदछ कि व्यक्तिले लगाउन सकिने उपकरणहरूमा खोजीको लागि उनीहरूको मोबाइल उपकरणको खोजीलाई प्रतिस्थापन गर्ने विचारलाई पूर्ण रूपमा अँगालेको छैन।
मान्यता:: मोबाइल एसईओ पनि एक चीज छैन!
सत्य: धेरै व्यक्तिहरू सोच्न चाहन्छन् कि मोबाइल एसईओ केवल एक शब्द हो जुन प्रायः फालिएको छ। यो सत्य हो कि धेरै व्यक्तिहरूले यसलाई त्यति बुझ्न सक्दैनन्, र त्यहाँ वरिपरि केही विशेषज्ञहरू छन्। त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छन् जसले मोबाइल एसईओको बारेमा गलत सोच्दछन्, तर यसको मतलब यो होइन कि यो अवस्थित अवधारणा हो जसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न आवश्यक छ।
मान्यता:: एसईओ एसईओ हो, र यो सबै समान छ
सत्य: होईन, होईन, होईन। SEO सबै एक समान छैन। स्थानीय एसईओ, मोबाइल एसईओ, र वेबसाइट जो डेस्कटप र ल्यापटप प्रयोग को लागी अनुकूलित छन् को लागी सबै एक समान छैन। जति चाँडो यो महसुस गर्नुहुन्छ र यसलाई तपाइँको साइटको लागि सुधार गर्नुहोस्, उत्तम रँकिंग र रूपान्तरणहरू तपाइँले प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मान्यता:: मोबाइल फोन र भोलामा केवल एसईओ कन्फिगर गर्नुहोस् - मोबाइल एसईओ!
सत्य: हामी चाहन्छौं कि यो सरल थियो तर यो त्यस्तो थिएन। तपाईं वेबसाइटहरूको लागि एसईओ टेलर गर्न सक्नुहुन्न र मोबाइल फोनको लागि यो परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एसईओ को लागी दृष्टिकोण वेबसाइटहरु अनुकूलन गर्न को लागी बिभिन्न भिन्न छ। त्यहाँ त्यहाँ मोबाइल उपकरणका अधिक भिन्नताहरू छन्, मोबाइल एसईओ वेबसाइट एसईओ भन्दा अधिक विशिष्ट र सटीक हुनु पर्छ। मोबाइल एसईओको बारेमा सिक्न समय र धैर्यताको आवश्यकता हुन्छ, तर जब यो सही भयो, यसले तपाईंलाई राम्रो नतिजा ल्याउनेछ।
मिथ्या an: एक अनुकूलित वेबसाइट निर्माण गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई मोबाइल फोनको लागि टेलर गर्नुहोस्
सत्य: तपाइँको वेबसाइटलाई सबै इन्टरफेसमा प्रयोग योग्य हुन अनुकूलन एक शानदार विचार जस्तो लाग्न सक्छ। जहाँसम्म, तपाईंले यो कुरा पनि विचार गर्न आवश्यक पर्दछ कि व्यक्ति अझै पनी उनीहरूलाई तपाईंको साइटबाट आवश्यक चीजहरू फेला पार्न सक्षम छैनन्। वास्तवमा, 60०% व्यक्तिहरू मोबाइल खोजमा जहिले पनि उनीहरूले चाहिने चीजहरू पाउँदैनन्। यो हुन्छ किनकि मोबाइल कार्यक्षमता सटीक छ र एक अलग इकाईको रूपमा विकसित गर्न आवश्यक छ र वेबसाइटको एसईओ रणनीतिमा लम्प्ड छैन। उदाहरण को लागी, बीएमडब्ल्यू र अमेजनले हजारौं डलर खर्च गरी मेहनत गरी खर्च गरीरहेको छ कि तिनीहरुका वेबसाइटहरु मोबाइल मैत्री छन् र मोबाइल एसईओ सही तरीकाले प्रयोग गरीएको छ।
मान्यता:: लिंकहरू पाउन गाह्रो छ जब तपाईं मोबाइल एसईओ प्रयोग गर्नुहुन्छ
सत्य: सत्यबाट अरु के हुन सक्दैन! वास्तवमा, सम्मानित साइट मालिकहरू वेबसाईटबाट लि get्कहरू लिन चाहन्छन् जुन राम्रो SEO अभ्यासहरू छन्। त्यसो भन्नुहोस् Google, Mashable, र अन्य आधिकारिक साइटहरुबाट लिंक प्राप्त गर्न।
हामी आशा गर्दछौं कि हामीले तपाईंलाई केही मोबाइल एसईओ मिथकहरू बस्ट गर्न मद्दत गरेको छ र चीजको वास्तविक मामलामा प्रकाश दिन्छ।